Tuesday January 27, 2015 - 15:26:59 in Local News by Chief Editor
Muqdisho, 27 Jan 2015. (Qalin) - Maalintii Axadda waxaa Muqdisho lagu soo dhoweeyey madaxweynaha Dalka Turkiga Md. Rajab Dhayib Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) oo dalka ku yimid Booqasho taariikhi ah oo qalbiyadda ummadda Soomaaliyeed ku reebtay xusuu
Muqdisho, 27 Jan 2015. (Qalin) - Maalintii Axadda waxaa Muqdisho lagu soo dhoweeyey madaxweynaha Dalka Turkiga Md. Rajab Dhayib Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) oo dalka ku yimid Booqasho taariikhi ah oo qalbiyadda ummadda Soomaaliyeed ku reebtay xusuus iyo hilow kalgacal, kaas oo waayo badan jiri donna haddii uusan waqtigu wax ka bedelin.
Maalmo ka hor inta uusan Madaxweyne rajab imaan ayaa jidadka loo xiray si ammaanka loo sugo, dadkana waxaa laga codsaday in ay u dulqaataan xaddidaada dhanka dhaqdhaqaaqa ah inta lagu guda jiro u diyaar garowga iyo soo dhoweynta wafdiga Madaxweyne Erdogan oo 10 dal oo qaaradda Afrika ah oo socdaal rasmi ah ku marayo ku daray Soomaaliya oo ah dalka uu ka furayey mashaariicda loogu baahida badnaa inta uu furay.
Jidadka Xiran dadka aad ayey saameyn ugu yeesheen nolol maalmeedkooda, waxaana dhici jirtay in ay dadka muujiyaan cabashooyin badan mararkii hore, balse xilligan la soo dhoweynayey Madaxweyne Rajab Erdogan dadka oo dhami waa ay ku qanacsanaayeen xirnaanshaha waddooyinka taas oo ay sabab u aheyd diyaargarowga ka muuqda Dowladda Soomaaliyeed oo ahaa mid ay dadka qancinayey.
Tabaruba ha gaarsiisee, in kastoo ay calamadu ka lusheen Baallooyin mirirsan oo fiilooyin tiro badan ka laalaadee haddana hawl muhasho qalbiga ku reebeyso oo qofkii damiir lihi uu ku qancayo ayaa laga qabtay arrinta ah in Madaxweyne Erdogan la dareensiiyo in Muqdisho ay tahay magaalo laga jecel yahay, waana xaqiiqo dhab ah in laga jecel yahay.
1. Markii uu dhacay qaraxii lagu weeraray Hotelka SYL ee ay degganaayeen wafdiga hordhaca u ahaa madaxweyne Erdogan dadka Soomaaliyeed ee adeegsada baraha bulshada in badan oo ka mid ah waxay arrintaas ku aheyd naxdin, waxayna ka qaadeen walwal ah in ay taasi baajiso safarka Geesiga ummaddan u muujiyey Hiilka Qaran ee ay bulshadana u heysay Hilowga walaaltinimo, waa Erdogane.
2. Arrinta labbaad ee ugu cajiibka badan ayaan ku soo qaadanayaa dhacdo aan Maalintii isniinta kula kulmay jidka Maka Al-Mukarama xilli aan shaqo u socday. Waxaan jidka kula kulmay Hooyo Soomaaliyeed oo da’deeda aan ku qiyaasay 70 jir oo dhulka ka qaadday mid ka mid ah calamaddii yar yaraa ee Turkiga ee jidka ku xardhanaa oo soo dhacay. Markii ay calankii qaadday, misena inta bustii ka jaftay dhunkatay ayey si cod dheer ah ku tiri, Erdogan dhulka ayuu naga qaadaye calankiisa dhulka uma quuri karno. Dareenka Hooyadan waayeelka ah oo isoo jiitay darteed ayaan maamaddii waydiiyey in ay hal lama labo tusaale iga siiso waxa ay u aragto inuu Erdogan dhulka kaga qaaday Soomaalida, waxayna iigu jawaabtay Haddii Ilaah laga cabsanaayo maanta Soomaaliya ma jiro qoys aan waxba ka faa’iidin soo gurmashadii hagar la’aaneed ee Dowladda Turkiga, waxayna si degganaan badani ka muuqato u tiri, Bilicdan soo noqoneysa ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ahba waa dhaqaalaha Turkiga si toos ah ama si dadban ha uga yimaadee.
Min madax illaa shacab looma kala harin soo dhoweynta Madaxweyne Erdogan, waxaana durba laabta qaboojinayey marka la arko caruur Soomaaliyeed oo ku lebisan dhar aad u bilic wanaagsan oo ka sameysan isku darka calamada Soomaaliya iyo kan Turkiga, intaas waxaan dheereyd warbaahinta Qaranka oo iyadana dadka aad uga haqab tirtay heeso iyo barnaamijyo ku saabsan Waqabadkii Turkiga iyo hiilkooda walaaltinimo ee ay nala garan istaageen.
Madaxweyne Erdogan iyo wafdigiisa oo markii ay soo degeenba dareemay Soo dhoweyntii ugu wacneyd intii ay marayeen Geyiga Africa ayaa laga dareemayey inuu aad u muujiyey qushuuc ay farxadi ku dheehan tahay, mana uusan qarsaneyn in uu muujiyo farxadda uu ka qaadday sida ay Bulshada Soomaaliyeed iyo Dowladdooda isugu hawleen in ay ku soo dhoweeyaan maamuus taariikhi.
Waxaa aad loola dhacay oo weliga dareen jiririco ah ku reebay qof walba oo Soomaaliyeed ama qof walba oo Turki u dhashay ee arkay, Gabadhii Soomaaliyeed ee 4 sano jirka aheyd ee Madaxweyne Erdogan ubaxa qiimaha badan ee taariikhiga ah ku guddoonsiisay gudaha Isbitaalka Erdogan ee horey loo oran jiray Digfeer, taas oo Madaxweyne Erdogan ku qaabishay muuqaal gudbinayey farriimo badan oo dareen qaran leh.
Gabadhu waxay xirneyd Cambuur ka sameysan calamada Soomaaliya iyo Turkiga oo si Heemaal milic macaan badan leh la isugu tolay, waxay huwaneyd Calanka Soomaaliya oo garbasaar xijaab ah u ahaa, waxayna gacanta midig ku heysatay laan ubax ah oo dhanka Hoose ubax dillaacay ka ah, dhanka kore wadne gudduudan ku leh, dhexdana caleemo qoyan ku sita, kaas oo gabadhu ay raacisay Salaan qushuuc badan gelisay Madaxweyne Erdogan iyo marwaddiisa koowaad, kuwaas oo durba inta gabadhii Soomaaliyeed haabteen dhunkasho iyo habsiin ku boobay.
Gabadha yer waxay Madaxweyne Erdogan ku tiri: Ku soo dhowoow kalgaceyl iyo farxad, waan kaaga mahadcelineynaa sida aad noo garab taagan tahay. Oraahdani ee ma soo baxeysay afka 4 jir gabar Soomaaliyeed ah, muuqaalka ay guntaneyd iyo xubnaha uu ka koobnaa Ubaxa ay dhiibtayba waxay Madaxweyne Erdogan uga tarjumayeen wanaagga aan sina loo qaadaa dhigi Karin ee looga hayo Soomaalia.
Haddii aan dib idin jalleeciyo waqtigii xariga laga jarayey dhismaha cusub ee garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, waxaa Iyana milicsigii koowaadba lala jiriricooday kaddib markii ay labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Turkiga soo hor istaageen labadii gabdhood ee Soomaaliyeed ee iyaga oo xiran guntiinooyin ka sameysan labada calan ee Soomaaliya iyo Turki isla markaasna siday masafo ubaxyo lagu xardhay oo ay saaran yihiin maqasyadii xarigga lagu jari lahaa la soo hor istaagay Madaxweynayaasha.
Laamaha Amniga ee dalka ayaa iyagana waxaa la siiyey boggaadin aad u weyn, kaddib markii ay ku guuleysteen in Muqdisho uusan ka dhicin wax qalqal ammaan ah inta ay doonaanba hala ekaadaane, xitaa maalintii uu Madaxweyne Erdogan dalka booqanayey lama hayo qof lagu dilay Muqdisho oo diiwaanka warbaahinta soo galay ama la soo wariyey, taas oo iyadana ah guul kale oo cid walboo gacan ka geysatay ay mudan tahay in la boggaadiyo. Ciidanka ammaanka ee sugayey amniga guud ahaanba waxay ahaayeen ciidanka Amniga Soomaaliya ee Booliiska iyo nabadsugidda marka laga reebo la taliyeyaal dhanka ammaanka ah oo dhanka Turkiga ka socday, kuwaas oo la shaqeynayey ciidanka Soomaaliya ee ammaanka sugayey.
Haddii hawshii qaran ee taariikhiga aheyd ee qabsoontay qof uun ama hay’ad lagu bogaadinayo oo aan noqonayno dad is bogaadiya waxaa kaalinta 1-aad galaya Hay’adaha Ammaanka Qaranka oo si aan marna habac laheyn u sugay ammaanka si uusan habac u galin habsami u socdoka hawsha, taas oo hawshooda hagar la’aaneed mooyee aysan dhacdeen in ay wax hagaagaan.
Sidoo kale maamulka Gobalka Banaadir ee bilicda magaalada sida aadka ah u soo saaray ayaa isna mudan in dhankiisa lagu boggaadiyo hawsha uu qabtay, waxaanna bogaadinta inteeda kale iska leh bahda warbaahinta Soomaaliyeed oo hawshaas wanaagga badan ee qabsoontay aaney sidan wanaagsan bulshada ugu riyaaqdeen tebintooda tooska aheyd la’aanteed. Waxaana dhihi karnaa Warbaahinta Soomaaliyeed waa ay qaan gaartay xilligan, waxayna hanatay doorkeeda shariifka ah ee ay bulshada uga fadhiday.
Mar haddii aan sidaasi wanaagga badan leh u qeexay muuqaalkii qurxoonaa ee ay quluubteena ku reebtay Booqashadii Madaxweyne Erdogan iyo agaasinkii wanaagsanaa ee ay sameysay dowladda Soomaaliya haddaba maxaa faa’iido ah ee ay bulshada u keeneysaa booqashadaasi, ayaa la is weydiin karaa.
Mar haddii Madayweyne Erdogan muddo 3 sano gudahood ah uu kaga dhabeeyey balanqaadyadiisii ahaa inuu Soomaaliya ka caawinayo dhanka Waxbarashada, caafimaadka iyo dhismaha Jidadka caasimadda, isla markaasna ay intaas noo raaciyeen dhismaha Garoonka Diyaaradaha iyo Ballaarinta dekedda Muqdisho haddana balanqaadkiisii ahaa inuu Muqdisho ka dhisaayo toban kun oo guri ayaa isna la filayaa inuu ku fulo waqti aad uga kooban kii hore ee uu ku balan qaaday.
Muqdisho oo ah magaalo aan anaga oo ah dadkeedii dayacnay, Booqashadii Erdogan ee Bishii Agoosto ee 2011, waxay ka dheeftay Isbitaallo badan oo aad casri u ah, Iskuullo heerkoodu gaarsiisan yahay kuwa Turkiga, laamiyadii oo badankoodii dhismay, ganacsigii oo aad u bulaalay, Garoonkii Diyaaradaha oo la casriyeeyey, Dakaddii oo ay ku socoto dib u hagaajin, masaakiintii dhammaaneysay oo gargaar heshay iyo ummadda Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay muddo 20 sano ka badan heshay gacal u gargaara oo aan gummaadkeeda ka qeyb qaadaneyn, intaas oo isku duuban iyo kuwo badan oo aan la soo koobi karin oo wanaag ah ayuu Madaxweyne Erdogan ka fuliyey Soomaaliya, dadka Soomaaliyeedna way uga abaal hayaan mar walba.
Ugu dambeyntii, Haddii la qalli lahaa wadnaha qof walba oo Soomaali ah maanta, waxaa hubanti ah xinjirta wadnaha bartankiisa kulaashaa iyo xidida cad cad ee dhiigga qaada isku darkooda in uu ka sameysmi lahaa Calanka dalka Turkiga, halka qanjirada kale ee soo harayna ay u qaabeysmi lahaayeen Magaca Halyey Erdogan.